Diinta MP4 in AVI iyadoo la sii tayo wanaagsan yahay gool la doonayo dad badan. Sababtoo ah files AVI ku jiri kara kala duwan oo ah il audio iyo video muddo waqti, beddelo files MP4 in AVI ayaa noqday dalab caansan ka mid ah dadka isticmaala badan. Sidaa darteed, sababta oo ah awood si uu u qabto tiro badan oo ah faylasha, u baahan tahay diinta MP4 in ay qaab AVI inta badan baxdo. Diinta MP4 in files AVI ma aha wax adag, dhammaan waxa looga baahan yahay waa in ay helaan Converter ku haboon file in uu samayn doono shaqada wanaag iyo qanci karo. Intaa waxaa dheer, marka laga reebo awood u leh inay qabtaan files badan waxa, sidoo kale samatabbixin files ee tirada yar, sidaa darteed suuragelinayo effortless download / Uploads warbaahinta kasta oo la heli karo. Sidaas daraaddeed Dhibaatada waxa ay tahay sida faylasha MP4 loo rogi karaa in files AVI aan khasaaro tayo leh. Haddii lagu soo food nooc kasta oo ka mid ah arrimaha ku saabsan diinta ee MP4 in AVI, qodobkan waxaa lagu wadaa in ay bixiyaan habka ugu baxay 3 qaybood oo kala duwan in ay yihiin;
Qeybta 1: Best MP4 in AVI Video Converter
Qeybta 2, MP4 Free in AVI Converter
Qeybta 3: MP4 Online in Converter AVI
Qeybta 4: Dooro MP4 in AVI Video Converter in adiga kugu habboon
Part5, Aqoonta Extended u AVI iyo qaabab MP4
In kasta oo la heli karo ee Tiro badan oo MP4 in converters AVI, waa howl culus aya hortaala si aad u hesho Converter la isku halayn karo oo aan kaliya sheegasho, laakiin dhab ahaantii file kuweeda la eber tayada khasaaro. Si kastaba ha ahaatee, in "Wondershare Video Converter Ultimate" Horumarinta in hadda looma baahna in aad raadiso Converter kasta oo kale sababtoo ah waa xirmo buuxda mahad.
Waxaa jira converters badan oo abuuray in la beddelo files ka mid qaab kale ah; laakiin dhammaantiin ma aha run ahaantii la kulmay filayo sida dayactirka tayo sare leh ee geeddi-socodka ah ee diinta, qaab xawaaraha, kartida si loo abuuro size file yar yar in ay awood u dhib-free Upload file / downloads. Wondershare Video Converter Ultimate waa mid ka mid ah converters ku kalsoon tahay in loo isticmaalo MP4 in AVI diinta. Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah sababaha Converter file tani waa uu ku caanka ahaa ee maalin kasta marayay.
Wondershare Video Converter Ultimate Waa Converter files xirfadle in caawisaa inuu wax ka beddelo videos la mid ah khabiir video ah diinta barnaamijka nidaamka.
Waa awood diinta qalabka uu filaayo in presets for loo maqli karo dhib-free.
Waxaa badasha xawaare aad u fiican, ilaa 30 jeer ka dhakhsi badan converters kale.
Waxaa kor u taageeray qaab maqal iyo video
Sida loo isticmaalo Wondershare Video Converter Ultimate si loogu badalo MP4 in AVI?
Si aad u isticmaasho Converter aad u baahan tahay si ay u soo bixi website-ka. Software waxaa laga heli karaa labada isticmaala Windows iyo Mac.
Ka dib markii download iyo rakibaadda, waxaa laguu keenay in doonaa inay riix "hadda bilaabi" button.
Next waa in ay helaan faylka MP4 (s) in aad rabto in aad si loogu badalo, jiididda iyo hoos u galay suuqa kala bixiyo ka dib markii gujinaya bilowga hadda button. Haddii kale, daaqadaha sidoo kale bixin kale oo faylka si toos ah lagala soo baxo aad desktop ama ilo kale oo halkaas files ku yaalaan. Eeg sawirka hoos ku qoran:
Ka dib markii ay soo degsado faylka, dooro file MP4 aad jeceshahay inaad ku beddelato ah, waxaad u baahan doontaa inaad doorato file aad u socoto taas oo ah AVI. Eeg calaamad arrow si ay u helaan wax soo saarka caga AVI ee image hoose ee:
Dooro mid ka mid darto files, ama jiitaa sii jeedi doorasho ee Converter ah; isla markiiba ka dib markii qaadaya tallaabo, daaqad sida tan hoos ku furi doonaa; ka dibna si fudud guji diinta.
Marka file waxaa ku lifaaqan, tallaabada xigta waa in guji diinta. Ka dib markii gujinaya diinta, waxaad waxaa lagaa codsanayaa in ay ama iibsato version ka buuxo ama sii Maxkamad ku free. Haddii ujeedadu waa in demo iyo waayo-aragnimo gacan koowaad waxqabadka Converter ah, waxaad riixi kartaa sii wadaan in ay maxkamad, ama haddii aad hore u dhaadhacsan ku saabsan waxqabadka, si fudud guji iibsan hadda doorasho. Eeg sawirka hoose si aad u ogaado wax soo saarka ugu danbeeya ee diinta file ka MP4 in AVI.
Sidaas, waxaad la sameeyo la-socodka oo dhan. Hadda waxaad ku raaxaysan karaan faylka la gediyay ama video.
Waxaa laga yaabaa inaad soo badan oo software oo sheeganayay inay ku siiyaan xalka ugu wanaagsan ee la xiriira diinta file laakiin dhammaantood ku jiraan ma lagu kalsoon yahay oo aan xitaa si siman natiijooyin fiican ka ay guud ahaan. Sidaas, waxaa laga yaabaa in xoogaa adag tahay inay helaan mid ka mid ah in badasha qaab video aad aan wax u dhimin tayada image aad content iyo. Laakiin ma aha in wax aan macquul aheyn, gaar ahaan marka aad isticmaalayso "Wondershare Video Converter Free".
Qaababka ugu muhiimsan ee software waxa ay kala yihiin;
Waa Converter oo lacag la'aan ah.
Waxaa u bedeli karaan mid ka mid ah qaabab faylka (audio / video) xadka aan.
Waa ay fududahay in la isticmaalo.
Waxay bixisaa tafatirka, falinjeeerka, goynta iyo goobaha riixo file ku xirmo hal.
Waxaad si toos ah uga soo bixi kartaa YouTube video, la qalab cajiibka ah.
2. Sida loo Beddelaan MP4 in AVI la Wondershare Video Converter Free?
Raac tallaabooyinka fudud ee hoose ku xusan oo badan si loogu badalo aad MP4 video inay qaab AVI.
Si aad u isticmaalaan Converter tan aad leedahay si aad u dejisan. Waxaad ka heli kartaa nuqul ka mid ah aad ugu link siiyey: http://www.wondershare.com/pro/free-video-converter.html
Rakibo barnaamij ka dib, la furo dariishadaha ee Converter iyo jiidi faylka waa in, taas oo aad rabto in aad si loogu badalo. Waxa kale oo aad dajiyaan karaa video by "Add file" doorasho qaybta hoose.
Marka dhinaca midig ee suuqa, arimo la kala dooranayo qaab faylka. Guji ku yaal iyo doortaan "AVI".
Ka dib markii ay soo degida faylka, raadi ah "badalo" icon on qaybta hoose ee interface ka. Riix in si ay u bilaabaan diinta file.
Marka file ah waxaa loo baddalaa waxaad arki doontaa in yimaaddo doorasho cagaaran ee la dhammeeyayna, kaliya ka sokow faahfaahinta faylka. Hambalyo! Waxaad ayaa dhameystirtay diinta faylka. Hadda, aad ku raaxaysan kartaa video.
MP4 Online in AVI Converter
MP4 Free in AVI Converter
i Best MP4 in AVI Video Converter
Aqoonta Dheeraadka ah u AVI iyo MP4 Qaabka:
Ururka Caalamiga ah ee jaango'an (ISO)
Nooca code "VFW"
Audio, Video iyo ext
Kulayeeshay Video Video
Windows Media Player, Lugood, Quick Time Player
> Resource > MP4 > Sida loo Beddelaan MP4 in AVI la Loss Tayada Zero?